Direct Direct na-arụ ọrụ! | Martech Zone
Tuesday, January 9, 2007 Tuesday, June 9, 2015 Douglas Karr
M na a pụtara na-ede banyere nke a kemgbe tupu New Year ma m nwere iji nweta 'ol nyocha si sere ọnụ ndị a oyiyi nke ụfọdụ kpọmkwem mail m natara na nso nso. Ihe bụ isi bụ na ụfọdụ mail ka na-arụ ọrụ. Lee ihe atụ atọ:
Jack Hayhow zitere m akwụkwọ ya, Amamihe nke Ezi-efe efe. Echere m na nke a bụ 'onyinye' mbụ m nyere dịka blogger! Enwere m akwụkwọ ole na ole na abalị m ugbu a iji mechaa - mana m na-atụ anya igwu ala na nke a. Ọ bụ ihe dị mma iji nweta akwụkwọ aka Jack dere yana akwụkwọ ahụ. Na Jack wepụtara oge dee m ma zipu akwụkwọ ahụ pụtara ọtụtụ ugbua!
CVS Acylọ ahịa ọgwụ zitere m kaadị maka ezumike ahụ na-ekele m maka nkwado m. Ejiri onye ọrụ ọ bụla bịanye aka n'onwe ya! CVS m mara mma. Ọ na-echetara m ọtụtụ ụlọ ahịa akuku anyị na-eleta na-etolite na boonies na Newtown Connecticut (A na-akpọ ụlọ ahịa ahụ Crossroads… ha na-ahapụ ụmụaka ka ha bulie biya ma soro nne na nna anyị jiri ekwentị kpọrọ ya. … Nwoke abum agadi!). Ọ bụrụ na CVS nwere mkpụrụ osisi, enwere m ike agaghị aga ịzụ ahịa n'ụlọ nri ma ọlị! CVS gosipụtara na ị nwere ike ịbụ nnukwu agbụ ma ka na-emeso ndị mmadụ dị ka onye agbata obi gị.
Wikimedia zitere m kaadị na mpempe akwụkwọ iji kelee m maka onyinye m Wikipedia afọ gara aga. M na-ewerekarị ego Paypal m ma nyeghachi ha ndị mmepe mgbakwunye na weebụsaịtị ndị na-arịọ maka onyinye - ọ bụrụ na ngwanrọ ma ọ bụ ọrụ ha bara uru. M na-eji Wikipedia ọtụtụ ihe na blọọgụ a ka ị nwee obi ụtọ ịmara na akụkụ nke mgbasa ozi sitere na saịtị ahụ na-agbanye na saịtị ndị ọzọ. (Ihe fọdụrụ dị mkpa iji kwụọ ụgwọ maka agụmakwụkwọ nwa m nwoke!).
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ n’oge a na ndị folks ka na-amata ihe mmadụ ‘mmadụ’ pụtara. Jack gaara ezitere m akwụkwọ ya site na Amazon, ma CVS na Wikimedia nwere ike zitere m email na-ekele m. Abụ m onye nkwado nke email… M hụrụ eziokwu n'anya na enwere ike ịhazi ya na akpaghị aka ya. Nke a were obere mbọ karịa ma ọ ga-efu ntakịrị ihe. Nke ahụ na-agwa m na ndị folks a chere na m dị mkpa maka azụmaahịa ha na ọ bara uru itinye ego na m. Nke ahụ bụ ozi siri ike, ọ́ bụghị ya?
Nke ahụ bụ ụdị akwụkwọ ozi na-arụ ọrụ. Puku mpempe akwụkwọ ozi ndị ọzọ m nwetara ebe a enweghị ọnụ ahịa. Agwara m ndị ahịa tupu oge ị ga - eji mee ka mmadụ lebara gị anya site na izipụ akwụkwọ bụ oge ọ ga - ewe ha iji si igbe igbe ozi ha gaa na mkpofu ahịhịa ha. Agbanwebeghị m echiche m na nke ahụ ma ọlị. Izipu ihe eji ede ederede ma ọ bụ kaadị ekele ị na-adọrọ uche m!
Tags: ozi ederedeahia ahiaOmenala ahia
Nkọwa. Anyị chọrọ mmetụ mmadụ aka - ọ bụghị nke ahụ bụkwa otu n’ime ihe mere blọọgụ ji buru nnukwu ibu?
Nne na nna anyị ochie ji akwụkwọ ozi ịhụnanya ejiri aka dee. Taa ọ bụ ngwa ngwa SMS. Abụchaghị otu, eh?
> Amamihe nke Ugbo Na-efe efe. Echere m na nke a bụ ezigbo mbụ m? dị ka onye na-ede blọgụ!
Jiri nlezianya Douglas - ị maghị ịnakwere onyinye nwere ike ibute ụkpụrụ omume gị ka a jụrụ gị questioned LOL
> M na-ewerekarị ego Paypal m ma nyeghachi ha ndị mmepe mgbakwunye na weebụsaịtị ndị na-arịọ maka onyinye - ọ bụrụ na ngwanrọ ma ọ bụ ọrụ ha bara uru.
Amalitere m ime nke a na njedebe njedebe afọ gara aga. Ọ bụ ezigbo mmetụta iji nwee ike inye aka na ndị nyere oge ha iji mee ihe anyị na-eji kwa ụbọchị.
Ànyị maara na akwụkwọ ozi ndị a na-arụ ọrụ n'ihi na ha na-eme ka ụlọ ọrụ zigara gị ozi mkpọsa ozi na-abawanye?
Jenụwarị 9, 2007 na 4:51 PM
Nke a bụ ọkwa maka ndị mgbasa ozi niile, adị m ọnụ ala, dị mfe ma na-akwụwa aka ọtọ. Nwere ike ịzụta m, mana m ga-eme ka mmadụ niile mara na azụrụ m. 🙂
Ekwenyere m na gị na Paypal. Enwere m olileanya na ọ bụ omume na-aga n'ihu. Open iyi dị mma maka anyị niile!
Jenụwarị 9, 2007 na 4:54 PM
Dị ka nchekwa data nchekwa, ọ siri ike ịkọwa ụdị ego a, ọ bụghị ya? Maka na ị nweghị ike ịtụ ihe apụtaghị na ọ bụ ezigbo echiche. Lọ ọrụ ndị 'na-eme ihe ziri ezi' na-amalite ọganiihu n'ezie. Ekwenyere m n'ezie na ụbọchị ụfọdụ, anyị ga-enwe ndekota 'uru' maka ụlọ ọrụ ụbọchị ụfọdụ ka ndị mmadụ wee soro ụlọ ọrụ ndị ga-abara mba ahụ uru karịa njọ.
Ma ọ dịkarịa ala, enwere m olileanya!
Jenụwarị 9, 2007 na 10:52 PM
Obi abụọ adịghị ya, ime ihe ziri ezi dị mma. M ga-abụkwa onye mbụ ga-esi n’azụ ụlọ ọrụ na-eme ihe dị mma. Imefu oge na-eme ihe ndị a na-eme ka ROI ka mma karịa imefu ego na azụmahịa TV.
Ọtụtụ afọ gara aga, m nọdụrụ n’ime ụlọ na folks si Hallmark. Ha choro imeputa ihe omume akpaka maka ulo oru m, nke jikọrọ ya na usoro CRM. Nye m, nke ahụ megidere ihe ị na-akwado. Enwere ezigbo ụzọ dị n'etiti ime ihe ọma, ime ihe dị mma, na ịnwa ịba uru. N'ebe gị, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma, ahịa na uru ga-esochi.
Jenụwarị 10, 2007 na 9:47 PM
Echere m na okwu gị gbasara "mmetụ mmadụ" dị oke mma.
Anyị achọpụtala na nzipu ozi nzipu ozi na ihe mgbasa ozi iji kwalite
ụlọ ọrụ anyị akwụla ụgwọ dị ukwuu. Email dị mma, mana ọ na-aghọ
na-erughị na ntụkwasị obi. Ọtụtụ spam na ihe efu. Ọ na-ewe iwe.
Zipu ozi; n'agbanyeghị, na-aga n'ihu na-emechi ahịa, na dị ka i kwuru "mmadụ
aka ”na-egosi na ọ ga-enyere gị aka ịmata.
Anyị achọpụtala na ijikọta ọnụnọ weebụ n'ịntanetị na mgbasa ozi ozi ntanetị ziri ezi
na-arụ ọrụ kacha mma maka katalọgụ ụlọ ọrụ ndị anyị na-anọchi anya. Enwere nnukwu uru
na ire ahia di iche iche. Otu ụlọ ọrụ enwekwaghị ike ịdabere soley n'otu ụgbọ ala ahịa.
Enwere m obi ụtọ na edemede gị… ị nwere onye na-agụ akwụkwọ na-agụ m agụụ!
kpọọ ya na ezigbo “nzipu ozi nzi ozi” na-aga n'ihu na-egosi